नायीका सुष्मा कार्कीलाई ऋषि धमलाले किन केक खुवाए त ? « Kalakhabar
नायीका सुष्मा कार्कीलाई ऋषि धमलाले किन केक खुवाए त ?
प्रकाशित मिति : सोमबार, ३ फाल्गुन २०७७ २०:१५
३,फागुण–काठमाण्डौं । नायीका सुष्मा कार्कीले फेब्रअरी १४ तारिखका दिन आफ्नो जन्मत्सव मनाएको छ । सो अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार ऋषिधमलाले केक खुवाएका थिए । बर्दिया जिल्लामा जन्मिएकी सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’ चलचित्रबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्।
मोडलिङ्ग हुँदै चलचित्रमा लागेकी उनले दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन्। चलचित्र क्षेत्रमा भने उनलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गराएका थिए। सुष्माले आफ्नो जन्मदिन धुमधामले मनाएकी छिन।
उनले दरबार मार्गको एउटा कलबमा केही पत्रकार तथा कलाकारहरुको माझमा आफ्नो जन्मत्सव मनाएकी हुन् । एक दशकअघि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पाइला टेकेकी सुष्मा कार्कीको अभिनय यात्रा फिल्म मेरो एउटा साथी छ बाट सुरु भएको थियो ।
फिल्म लुटको उध्रेको चोलीमा आइटम नृत्य गरेपछि उनी धेरैको नजरमा परेकी थिइन् ।